mardi, 28 avril 2020 19:31
Taom-piotazana lavanila: Hanomboka ny Alarobia 03 Jiona 2020 ny aty amin’ny Faritra Anôsy
Hatao ao amin’ny Kaominina Ranomafana ny Alarobia 03 Jiona ny fanamarihana ny fanombohan’ny taom-piotazana lavanila ho an’ny Faritra Anôsy amin’ity taona 2020 ity. Tsara ny kalitaon’ny Lavanila aty amin’i Faritra Anôsy, araka ny fanadihadiana nataon’ny teknisianina na dia vao mirotsaka amin’ity seha-pihariana ity aza ny mpamboly aty an-toerana.
mardi, 28 avril 2020 12:55
Amerika: 22 tapitrisa no very asa ao anatin'ny iray volana
Tsy vitan'ny mamono ny valanaretina Covid-19 any Amerika, fa maro ireo orinasa no tsy tafarina vokatry ny fihibohana sy ny fikatsoan'ny toe-karena, ny tsy fahazoana mifamezivezy, ny fikatonan'ireo orinasa maro mpamokatra sy mpamatsy akora. Nitombo 7 tapitrisa ny faran'ny herinandro teo ireo voaroaka amin'ny asa. Mahatratra 22 tapitrisa ao anatin'ny iray volana no very asa. Izany hoe olona 8 isa-tsengondra no very asa. Niavaka kely ny fandroahana mpiasa ny an'ity orinasa Bird, vao misandratra ara-teknolojika mpampanofa trottinette, fa mpiasa 400 mahery no noroahina tao anatin'ny minitra vitsy tamin'ny alalan'ny visioconférence na fivoriana avy alavitra. Raha 144 ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 ny 8 marsa 2020, dia lasa 1 tapitrisa ankehitriny, roa volana aty aoriana, no voa any Amerika, 114 000 no sitrana, ary 56 634 no maty.
lundi, 27 avril 2020 17:13
Fitaterana an-tanety: Mangataka ny hisokafan'ny tobim-piantsonana Fasan'ny Karana ireo mpisehatra eny
Nifamory teny amin’ny tobim-piantsonana Fasan'ny Karana, androany, ireo mpisehatra amin’ny fitaterana an-tanety miasa eny, nahitana solontenan'ny mpamily tompona fiara, mpamily mpikarama, mpandraharaha, mpamatotra entana ary mpitantana vitsivitsy ao amin’ity tobim-piantsonana ity. Samy nilaza izy ireo fa efa tsy fahasahiranana intsony no misy fa efa fahantrana mihitsy, taorian’izay iray volana mahery tsy afa-niasa izay noho ny fihibohana izay. Betsaka anefa ireo manana antom-pivelomana miankina amin’ity tobim-piantsonana Fasan'ny Karana ity, tsy ny mpampiasa fiara ihany ka mangataka ny hisokafany avokoa. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 27 avril 2020 13:43
Rosia: Ampitsahatra ny fanondranana céréales
Nanambara ny minisitry ny fambolena rosianina fa ahantona aloha ny fanondranana ny céréales (blé, seigle, orge, maïs) hatramin'ny 1 jolay 2020, noho ny fiarovana sao tsy ho ampy ny ho aniny mandritra izao fihibohana maneran-tany izao. I Rosia no mpanondrana be indrindra maneran-tany amin'ireo akora fanamboarana lafarinina ireo, ka ao no mpahay toe-karena mijery fa mety fomba ampiasain'ny Rosianina ampakarana ny vidin'io akora io koa izao, toy ny efa nataon'ny Rosianina amin'ny resaka solika hifehezana ny tsena iraisam-pirenena. Ny volana aprily teo izy no efa nametra ho 7 tapitrisa taonina ihany no ahondrana, fa izao dia nahantona mihitsy. Manahy ny FAO, fikambanana iraisam-pirenena momba ny fambolena sy ny sakafo, ny OMC fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra, ary ny OMS fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana, fa mety hitarika tsy fahampian-tsakafo izao fanapahan-kevitra izao. 200 dolara na 740 000 ariary amin'izao ny taonina amin'ny blé eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Fonjan’i Nosy Lava: Hamboarina sy atao toerana fitsangatsanganana
Nitsidika ny Distrika Analalava, ny sabotsy 25 aprily, ny Governora’ny faritra Sofia, Lylison René de Rolland sy ny Prefen’Antsohihy miaraka amin’ireo talem-paritra. Tonga Nosy Lava nijery ny fonja taloha izy ireo, ary nivoitra tamin’izany fa ho amboarina sy atao toerana fitsangatsanganana ity vakoka manan-tantara ity. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 25 avril 2020 20:22
Covid-19: Misedra olana ireo faritra arovana noho ny mety ho fihenan’ny famatsiam-bola avy any ivelany
Miisa 144 ireo faritra arovana eto Madagasikara ka tantanan’ny Madagascar National Park (MNP) ny 46 amin’ireo, tantanan’ny ONG isan-karazany ny 92 ary ny Ministeran’ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy no manara-maso ny 15 izay misy mifampiditra amin'iretsy karazany roa iretsy. Mizara ho sokajy roa ireo faritra arovana ireo ; ny voalohany dia ireo niforona talohan’ny 2005 izay famatsiam-bola avy amin’ny Governemanta Frantsay sy Alemana ary ny Banky iraisam-pirenena no ahafahana mitantana azy. Ny faharoa dia ireo faritra arovana vaovao na « nouvelles aires protégées » izay misitraka ny famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM na « Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar », manana renivola mitentina 75 tapitrisa dolara. Ankehitriny dia faritra arovana miisa 40 no misitraka io famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM io. Noho ny fiantraikan’ny Covid-19 amin’ny toekarena manerantany dia ahiana hihitsoka izany famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM izany.
samedi, 25 avril 2020 19:54
Covid-19: Namolavola drafitra sosialy ireo mpisehatra ara-pizahantany eto Toamasina
Nifamory tao amin’ny hotely Neptune, androany, ireo mpisehatra ara-pizahantany eto Toamasina, nikaon-doha sy niara-namolavola drafitra sosialy haroso amin’ny mpitondra mahefa, mba hanarenana an’ity lalampihariana ity, izay voadona mafy noho ny fisian’ny valanaretina Coronavirus eto Madagasikara. Mangataka ny hisitraka tohana ara-tsosialy ireo mpisehatra ara-pizahantany, ary nisy ny lisitra efa nalefa any amin’ny solontenam-panjakana eto an-toerana mahakasika izany. Mangataka ny hanafoanana ny fandoavana latsakemboka toy ny Cnaps sy Ostie izy ireo, toy izany koa ny hanemorana ny fandoavana ireo hetra sy haba samihafa sy ny faktioran’ny Jirama.
samedi, 25 avril 2020 13:14
Mahitsy – Ambohidratrimo: Miroborobo ny famokarana vary safiotra sinoa « Weichu 902-3 »
Tafakatra 10 taonina isaky ny hektara ny taham-bokatra amin’ity vary safiotra sinoa karazana Weichu 902-3. Tonga nitsidika ny firoboroboan’ny famokarana io vary safiotra sinoa io teny Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga, ny Minisitry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien sy ny solontena maharitry ny FAO, Patrice Talla Takoukam, ny 23 aprily 2020. Masomboly vary safiotra 100 taonina no naparitaky ny ministera tamin’ity taona 2020 ity tamin’ny velaratany 4 000ha amin’ny Faritra Alaotra Mangoro sy Analamaga ary Menabe, izay ahazoana taham-bokatra 8 taonina/ha farafahakeliny. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 21 avril 2020 18:01
Photo empruntée sous la manche
Covid-Organics: Combien ça coûte?
Calcul vite fait: 1500 ar la bouteille de Covid-Organics en 33cl Posologie:Adulte 2 bouteilles/j x 7 = 14 bouteilles x 1500ar= 21 000arEnfant 1 bouteille/j x 7 = 07 bouteilles x 1500ar= 10 500ar 15 millions Malagasy plus de 16 ans = 15 000 000 x 14 bouteilles = 210 000 000 bouteilles10 millions Malagasy moins de 16 ans= 10 000 000 x 07 bouteilles = 70 000 000 bouteilles Total production si on considère tous en bouteille pour faciliter le calcul (mais des infusions et ravina à préparer pour les adultes sont réellement prévus) = 280 000 000 bouteilles, avec la marge casse... 300 000 000 bouteilles Coût Total à payer par l'Etat= 300 000 000 bouteilles Covid-Organics x 1500 ar = 450 000 000 000 ariary. Avec les transports et distributions, arrondissons à 500 000 000 000 ariary (2500 000 000 000fmg = 135 000 000$ USD), cela rentre bien dans nos budgets.
samedi, 18 avril 2020 17:31
Trouvez l'erreur: Camion firy no hitaterana ny vola nomen'ny Banque mondiale ho tonga eny Ivato?
Nahazo vola 444.10 millions de dollars tamin'ny Banque mondiale sy ireo mpamatsy vola hafa isika, 90% nindramina. Raha atao coupure de 100 dollars izany, ary 10 billets x 10 ny paquet iray, 1000$ izany par paquet, ka 444 100 paquets de 1000$, izany hoe na kontenera iray aza tsy omby. Aza mikoropaka amin'izany koa e, tsy misy vola taomina amin'ny camion izany ho avy hitondra ilay vola devise eny Ivato, fa fax iray ihany no alefany, dia ny Banky foibe no manota vola mampiodina ny imprimerie hanamboarana vola Malagasy mitetina 1643 170 000 000 ariary, izay ilay hoe droit de tirage, na koa hoe création monétaire sous la bénédiction de la FMI. Fa rehefa amerina io vola io kosa ny Malagasy, satria trosa io, dia ny vidina la vanille tsika, café, crevette namidy tany ivelany no mitondra devise, dia iny no amerenana ny volan'ny Banque mondiale. Raha tsorina, dia ny azy taratasy fotsy 200 ar no nandefasany hafatra hoe manamboara ianareo vola, fa rehefa hamerina azy, dia ny vidi-katsembohan'ny mpandrarahanao no trohany.